Dota 2 anaghị eme nke ọma – Statistics ọhụrụ 4 kasị njọ nke afọ
Dota, otu n'ime egwuregwu ndị nwere ọtụtụ egwuregwu n'ụwa 2, ọ na-agba ọbara kwa ụbọchị.
Turkey bụ ụwa ọtụtụ nde ndị hụrụ ya n'anya na nke a bụ n'ezie ihe Dota 2 anaghị eme nke ọma ma ọlị. Onu ogugu di egwu kwa ọnwa nke ndi egwuregwu 2 ndi onu ogugu ha na-ada kwa ubochi 2014 Ọ bụghị ihe ọjọọ a kemgbe Eprel.
2011Kemgbe mmalite ya, egwuregwu ahụ abanyela ọwụwa site na itinyekwu egwuregwu. 2015 chebe eserese a ruo oge. 2015 Egwuregwu ahụ, nke malitere ịgbake mgbe ọnwa ole na ole dara ada na 2003, gara n'ihu na-ebili ọzọ site na ebe ọ dara. 2016 Ruo Ọktọba.
2016 Mbelata nke ọnụọgụ ọkpụkpọ kwa ọnwa n'ọnwa Ọktọba nke egwuregwu ahụ agbakebeghị kemgbe ụbọchị ahụ. Onwa nke anyi hapuru 780.000 Egwuregwu nke mechiri na ọkpụkpọ ọkpụkpọ ikpeazụ bụ Eprel 2014,(nkwalite nwere ajọ ọnụọgụ.
Kedu ihe kpatara na ihe kpatara egwuregwu ahụ jiri ruo ebe a bụ okwu ịmata ihe.. A na-etinye ọtụtụ echiche maka nke a.. Ka anyị nyochaa ihe ezi uche dị na ha ọnụ..
1) Ọnọdụ ndị ahụ na-ebupụ ụwa niile na enweghị ego na ndị obodo
1.1) Na-ebupụ ọkwa ịbụ mba ụwa
Dị ka ị maara, na Dota 2, Usoro njikọ mpaghara dị ka Njikọ nke Akụkọ Ifo enweghị usoro nhazi mpaghara nke bụ na. Nke na - etinye ndị ọgba bọọlụ n'asọmpi sọsọ n'ụwa niile. Ọbụna ndị egwuregwu isii kachasị elu enweghị ike ịchọta ebe egwuregwu iji gosipụta ma ọ bụ mejupụta uche asọmpi ha, ebe egwuregwu na-asọmpi nke a bụ n'ezie ụwa..
Ka anyị gụkọọ ọnụ; Puppey, KuroKy, Eluigwe na ala, Egwu, Dendi, EE, Ọnụ ọgụgụ, Ofufe, Ihu-, Solo, s4 ọzọ nke ahụ bụ na. Anyị na-anụ aha ndị a kemgbe afọ 2011-2012.. Na egwuregwu, Ọ bụ mmadụ ole na ole na-eme ihe nkiri nwere ike ijide ụwa niile. Ọ bụghị n'ezie. Anyị nwere ike ịtụle Ọrụ Ebube-ọhụụ ọbụlagodi, ka anyị gụọ Sumail ka ọhụụ ka ebe ọ bụla anyị lere anya 4. mana ka anyi guo afule obula. N'elu nke a anyị gụrụ ole na ole mana mana anyị enweghị ike ịzu oke. Anyị na-ahụ otu aha mgbe niile, nke na-egosi na ọnọdụ ahụ enweghị ike imeziwanye..
N'ihi enweghị usoro egwuregwu nke mpaghara, ọbụnadị ndị egwuregwu isii kachasị elu enweghị ike ịchọta oge iji nọdụ ma zụlite otu ha n'ezie na n'ihi na ha enweghị ike ị nweta ego site na egwuregwu a, yabụ, ha ga-ahọrọ egwuregwu ọzọ maka ebumnuche ọrụ ma ọ bụ tinye isi na ọrụ nke egwuregwu ahụ. na-anọ.
Nke ahụ bụ ọkwa anyị na-enye ihe atụ site na Turkey ma ọ bụ ihe nkiri nke mmasị ndị otu egwuregwu na-enweghị ike ịchọta ndị Dota'nın esp na-efunahụ ndị egwuregwu kwa ụbọchị. Nke a na-emetụta ọ theụ nke Dota na mba ahụ na mmata nke egwuregwu ahụ na mba ahụ.. Mgbe ọnọdụ ndị dị otú a jikọtara ọnụ, ọnụ ọgụgụ ndị na-egwu egwuregwu agaghị ekwe omume..
1.2) Enweghị itinye ego na mpaghara.
Anyị kwukwara n’elu, Mgbe enweghị ego na mpaghara, ndị otu na ndị ọkpụkpọ na mpaghara enweghị ike igosipụta onwe ha na nnukwu ọkwa. Nke a na-emetụta mwepụ nke ndị egwuregwu ọhụrụ si mba ahụ.. E wezụga nke a;
Mgbe enweghị usoro njikọ mpaghara na ụlọ ọrụ iji rụọ ọrụ nhazi na mpaghara, Enweghị ọrụ mgbasa ozi na mpaghara, egwuregwu ahụ bụ ya enweghị ike iru ndị egwuregwu ọhụụ. Na-eche na Njikọ nke Akụkọ Ifo na-akpọsa site na YouTube na mgbasa ozi ma na-ahazi asọmpi ọbụna na ụlọ ahịa kọfị dị na mpaghara, nke a bụ nnukwu ụkọ.. N'ihi enweghị ike ndị a, ọ nweghị ndị egwuregwu ọhụụ bịara n'egwuregwu ahụ, nke ochie ahụ bụ na ọnụọgụgụ na-emetụta ozugbo mgbe ha hapụrụ egwuregwu ahụ maka ebumnuche dị iche iche karịa oge..
2) Egwuregwu na-atọ ụtọ mmetụta ihe ọhụụ na nke ahụ bụ ọkwa ya
2.1) Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ndị Egwuregwu Abụghịzi Egwuregwu
Dota 2, tumadi na mbu ha “akụkụ-egwuregwu” mere ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe na-adịghị mma site na ibelata ọrụ ya n'ụdị nke mara mma na ogo dị egwu. Nke a na cheesy, Ọ gara n'ihu na-enweta ego site na egwuregwu ndị a, nke a bụ n'ezie stingy n'ihe banyere ụgwọ ọrụ ọ nyere n'aka na njedebe nke egwuregwu ahụ..
Iju onye obula. Anyi achoghi ka o bia na ndu?? Anyi achoghi Frostivious ibia?? Ọ bụ na anyị agaghị egwu ma ọ bụrụ na otu egwuregwu ahụ jiri otu ụgwọ ọrụ?? Anyị na-egwu egwu. Ọ na-ekwupụta nke a ọ bụghị naanị maka anyị kamakwa n'ọtụtụ forums, ọkachasị Reddit, nke ahụ bụ ndị egwuregwu gburugburu ụwa, mana enweghị nsonaazụ..
Kama diretide abịa egwuregwu naanị nke a bụ n'ezie na ndị nwe ya nwere ike isonye ma ọ bụ 10 ị ga-egwu egwuregwu nke uru dị na ahịa 50 penny onye nwere ike imeri onyinye.
Na mgbakwunye na ọnọdụ asọmpi, nbelata ọdịnaya dị otú ahụ nke ga-emesi ike ma nwee obi ụtọ na ihe ọkpụkpọ bụ otu n'ime isi ihe na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị egwuregwu..
2.2) Nmeputa ohuru na Onweghi
Enwere m ike ịnụ “ndị dike abụọ na-adịbeghị anya na 4-5 ihe rutere ọhụrụ nke a bụ n'ezie otu esi eme” Kedu ihe i kwuru. Bụ eziokwu banyere ndị dike, mana ihe… Ego ole ka anyị na-ahụ Meteor Hammer na Aeon Disc na egwuregwu anyị?? Ego ole ka anyị na-ahụ Nullifier? N'otu aka ahụ, ihe ọhụrụ ndị a, ọ bụ mgbakwunye karịa mgbanwe. Mgbanwe ahụ bụ ịgbanwe usoro MMR ma jiri usoro Badge dochie ya..
Enwere mgbanwe dị elu na nke a bụ n'ezie yana ọnụọgụ ọkpụkpọ ọkpụkpọ oge ọzọ Badge rutere, ebe ndị mmadụ chere na ihe ọhụrụ na-abịa mgbe usoro Badge bịarutere, mana mgbe ahụ ọ bịara na ọ nweghị ihe gbanwere na usoro ahụ.. Usoro ohuru bu nani ihe ngosi MMR. Ọnọdụ a amasịghịkwa ndị mmadụ..
Na mkpokọta ihe ndị a niile, anyị nwere ike ịghọta ihe kpatara egwuregwu a na-aga kwa ụbọchị.. Anyị gbalịrị ilebara nsogbu nke Dota 2 anya dịka anyị nwere ike. Anyị ga-achọ ịnụ echiche gị. Can nwere ike ikwupụta uche gị n'okpuru akwụkwọ mgbasa ozi anyị..
Kedu ka E-Spor si bịa??
Ọmụmụ nke E-Sports bụ n'ezie ọtụtụ afọ karịa ka i nwere ike iche.. 70Site na ojiji nke ụlọ nzukọ arcade na 1980s na 1980s, mmekọrịta nke ndị na-eto eto site na igwu egwuregwu na asọmpi ọnụ bụ mmalite nke E-Sports.. Kọmputa ndị mmadụ na-abanye n'ụlọ, Site na mgbasa nke ịntanetị na ntoputa nke egwuregwu asọmpi dị iche iche, taa e-Sports na-emepe ngwa ngwa ma na-agbasa..
Taa, a na-ahazi ọtụtụ mba na ọtụtụ asọmpi E-Egwuregwu.. Ngwuregwu asọmpi ndị a enyerela aka na mmepe nke egwuregwu kọmputa na echiche egwuregwu site na ịnye ọnọdụ ọkachamara maka ndị egwuregwu ịsọ mpi.. Nke a bụ ọnụọgụ asọmpi nke gọọmentị na nkeonwe a na-ahazi kwa ụbọchị na mmasi egosi na-abawanye., N'ihi ya, a na-emeghe ụzọ maka ndị egwuregwu-e ka ha rụọ ọrụ a dịka ọrụ ọkachamara.. Ugbu a, asọmpi E-Sports na onyinye ruru nde dollar na ọtụtụ puku ndị na-ekiri egwuregwu na mpaghara, aghọwo ihe omume ndị otu narị puku na-agbasa ozi na ntanetị na ntanetị.. E guzobela ọtụtụ narị klọb E-Sports n'okpuru nche anwụ nke ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị nkwado na-arụ ọrụ n'akụkụ dị iche iche nke E-Sports na klọb ndị a na-azụ ọzụzụ mgbe niile dị ka otu egwuregwu egwuregwu., mpi na asọmpi na asọmpi dị iche iche ma wusie ndị ọrụ ha ike site na ịnyefe mgbe ọ dị mkpa.. Na mgbakwunye, na mba dị iche iche nke ụwa, ha ebidola nweta akwụkwọ ikike nke ndị na-agba ọsọ site na ịgụta ha dịka nke ahụ bụ ndị egwuregwu e-egwuregwu.. Na Turkey 2014 esonyela mba ndị na-enye ikikere dị ka nke.
Kedu ihe bụ Esports? Bora Koçyiğit gwara Fanatik!
Steve, otu n'ime ndị mmepe nke DOTA, site na Egwuregwu Riot “Guinsoo” Ọ bụ ihe atụ nke ihe bụ isi bụ na DOTA nke malitere n'okpuru ndu nke Feak.. Dị ka ihe dị iche na nke ahụ bụ na egwuregwu si DOTA” na “Runes” nwere usoro. N'adịghị ka DOTA, onyinye anyị na-enweta na ikike nke ndị dike anyị ji na LOL enwere ike ịgbakwunye na nke a bụ n'ezie ihe.. Ruo ogologo oge ihe nkesa dị iche maka Turkey nke a bụ n'ezie egwuregwu na alaka ụlọ ọrụ na Turkey. Site na Egwuregwu Riot n'etiti mahadum dị na mba anyị, Turkey, na Turkey na-haziri dị iche iche na ukara tournaments nile, Ihe omume ndị a na-ahụta ka nnukwu egwuregwu E-Egwuregwu na mba anyị.. Galatasaray, Beşiktaş na Fenerbahçe nwekwara ndị otu.
DOTA 2 kedu ihe ọ bụ ka esi egwu?
Nchedo metụtara Ndị Ochie(DOTA) sitere dị ka mod nke emere maka Warcraft III, egwuregwu atụmatụ, DOTA na nkwekọrịta nke onye nrụpụta Icefrog na ụlọ ọrụ egwuregwu Valve 2 nọọrọ onwe ha na Warcraft III akpọrọ, ezitere dị ka egwuregwu dị iche iche bụ.
Egwuregwu ahụ na-ewere ọnọdụ n'ụdị ìgwè abụọ nke mmadụ ise na-ezukọ na nke ahụ. Na mbido egwuregwu ahụ, onye ọkpụkpọ ọ bụla bụ dike(dike) ahọrọ. Mgbe ahụ, nke a bụ n'ezie egwuregwu na-alụ ọgụ ndị ọzọ dike na kọmputa na-achịkwa nnukwu anụ kere na-akpaghị aka.. Site n'igbu ndi ozo ndi ozo na ndi ozo n'egwuregwu, i nwere ike irite ego poder na ihe omuma, megharia ma melite ihe omuma gi, inwere ike izuta dike gi site na iji ego gi.. Ihe mgbaru ọsọ nke egwuregwu ahụ bụ iji chebe isi ụlọ nke otu ọ bụla na nkuku ha ma kwatuo isi ụlọ na akụkụ nke ọzọ.. Ndị otu mbụ mere nke a meriri. Ndị ụlọ ọrụ dị iche iche na mba anyị na-ahazi asọmpi amateur / ọkachamara.. (E-eji E-Bergi)
Previous: Ihe Esemokwu
Next: otu ndị dike